कोरोना कहरमा समेत एलजीको बिक्री झण्डै ५० प्रतिशत बढि, ठूलो आकर्षण वासिङ मेशिनमा| Corporate Nepal
बैशाख ८, २०७८ बुधबार १७:२९
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका बीच पनि इलेक्ट्रोनिक्स सामाजिक बिक्री गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्ने र बजारमा सामान अभाव हुन दिएका छैनन् । नेपालमा त्यस्ता इलेक्ट्रोनिक घरायसी सामान बिक्रीमा संभवतः सबैभन्दा अगाडि रहेको कोरियन ब्राण्ड एलजीको सहजरुपमा मुलुकभर बिक्री हुँदै आएको छ ।
उपभोक्ताले पनि बजारमा एलजीका सामानहरू नपाएको गुनासो अहिलेसम्म आएको छैन् । नेपालमा यस ब्राण्डको बिक्री चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी इम्पेक्सले गर्दै आएको छ । यसैसम्वन्धमा ब्राण्डका उपमहाप्रवन्धक (सेल्स) पुरुषोत्तम भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीः
कोरोना महामारीका बीच पनि एलजीका सामानहरू बिक्री गर्दै आउनु भएको छ । यो समयमा तपाईंहरूलाई कस्तो खालको समस्या धेरै भोग्नुपरिरहेको छ ?
समस्या सबै क्षेत्रमा छ । आमनेपालीलाई नै छ । मुख्य समस्या त जनताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ । क्रयशक्ति घटेकैले एलजीका सामानहरू अपेक्षाकृत धेरै बिक्री हुन सकेको छैन् । अर्को समस्या भनेको आपूर्ति प्रणालीमा परिरहेको छ । बाहिरबाट सामान सहजरुपमा आउन सकिरहेको छैन् । आएका सामानहरू पनि उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन पहिला जस्तो सहजता भइरहेको छैन् । उपभोक्तालाई घरमा सामान आवश्यक भएर पनि नजिकको बिक्री केन्द्रसम्म आउन समस्या भइरहेको छ । यद्यपि समस्यासँग जुध्दै हामीले उपभोक्तालाई घरायसी सामानहरू आपूर्ति गरिरहेका छौं । समस्या छ भनेर हामी पनि घरमै बसिरहेको भए उपभोक्तालाई समस्या पथ्र्यो । हाम्रै रोजगारीमा पथ्र्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पथ्र्यो ।
कोरोनाको समयमा काम चाहीं कसरी गर्नुभयो ?
यस्तो परिस्थितिमा समयअनुसार नै काम गर्नुपर्यो । यो समयमा अनलाइन क्रियाकलाप हामीले बढायौं । डिजिटल मार्केटिङलाई फोकस गर्यौं । उपभोक्ताको घरमा प्रोडक्टको जानकारी लिएर गयौं । लकडाउन हटेसँगै गरेको मेहनतको फल हामीले गएको दशैंमा पयौं । अर्को कुरा एलजी कसैले नचिनेको नयाँ ब्राण्ड त होइन् । बिगत ३७–३८ बर्षदेखि एलजी नेपालमा छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित ब्राण्ड हो । त्यो भएकाले कोरोनासँग सम्वन्धित कुराहरूको सन्देश पनि उपभोक्तासम्म लिएर गयौं । कोरोनासँगै जुध्न सिकाउँदै मानिसहरूसँग हिँड्ने प्रयास गर्यौं । त्यसैका कारण अहिलेसम्म चल्न हामीलाई सहज भइरहेको छ ।
गत बर्ष लकडाउन हुनुअघिको एलजीको बिक्री कस्तो थियो ? त्यसपछि कति घट्यो ? अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाको सुधार के कस्तो छ ?
गत बर्ष चैत, बैशाख, जेठ, असार गरेर करिव चार महिना बिक्री अवरुद्ध नै भयो । त्यसले ४० प्रतिशत जति बिक्री प्रभावित भयो । साउनमा केही सुधार भयो । त्यसपछिको महिनामा निकै राम्रो भयो बिक्री । गत बर्षको फागुनसम्म र अहिलेको फागुनसम्म तुलना गरेर हेर्ने हो भने ४०–५० प्रतिशत नै विजनेश राम्रो भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
किन यति राम्रो प्रगति देखियो ?
हामी यस्ता यस्ता प्रोडक्ट ल्यायौं कि बदलिँदो परिस्थिति र मानिसको चाहनाअनुसारका आधुनिक थिए । जस्तो एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधिको वासिङ मेशिन यही कोरोनाको बीचमा ल्याऔं । वासिङ मेशिन भनेको नेपालको बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि हिस्सा भएको प्रोडक्ट हो । यसले बजार लिड गरिहाल्यो । निकै हिट भयो यो प्रोडक्ट । एआई प्रविधियुक्त यो बासिङ मेशिनमा हामीले जस्तो लुगा हालेका हुन्छौं, त्यस्तै अनुसार मेशिनले काम गरेर लुगा सफा गर्छ । त्यो विशेषता धेरैले मन पराए ।
यसमा हामीले टू स्ट्रोम भन्ने फङसन थपिदियौं । यसले के गर्यो भने लुगामा भएको गन्ध र एलर्जीलाई हटाइदियो । यो भनेको पानीको बाफबाट पनि कपडालाई सफा गर्ने कुरा हो । कोरोनाको समयमा हावाबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने थियो । हावाबाट अरु पनि रोगहरू आउँछ भनिन्छ । साथै अफिसमै बसेर पनि घरको लुगा धुन सकिने यसको अर्को विशेषता हो । यसमा भएको वाईफाई स्मार्ट थिङक्यू भन्ने फिचरका कारण अमेरिकामा भएको मानिसले यहाँ भएको वासिङ मेशिन अपरेट गर्नसक्छ । अहिले गरिरहेका छन् । वासिङ मेशिनमा भएको यस्ता विशेषताले यो प्रोडक्ट निकै लोकप्रिय हुन पुग्यो ।
त्यस्तै, अर्को रेफ्रिजिरेटर । अहिले कस्तो कल्चर विकास भएको छ भने एकै दिन सामान किनेर धेरै दिन पुर्याएर खाने । त्यो बजारमा हामीले हेर्यौं र उत्पादनसँग जोड्यौं । स्मार्ट लिनर कम्प्रेसर भएको नयाँ रेफ्रिजिरेटरमा १० दिनसम्म सामान जस्तो राखेको थियो, त्यस्तै अवस्था पाउन सकिन्छ । यो रेफ्रिजिरेटर पनि हामीले यही कोरोनाको बीचमा लन्च गर्यौं ।
त्यस्तै अर्को भनेको टिभी । कोरोना महामारी अघिसम्म लगभग मानिसहरूले टिभी हेर्न छोडिसकेका थिए । कोरोनाको समयमा टिभी हेर्ने बानी बढ्यो । हामीले ओलेड भन्ने टिभीलाई हाइलाइट गर्दै आएका थियौं । यसलाई चाहीं अर्गानिक लिड भन्छ । यसले पिक्चरहरू आफै जेनेरेट गर्छ । योसँगै तलका अन्य टिभीहरू पनि यो समयमा राम्ररी बिक्ने मौका पायो । भ्वाइसबाटै टिभी चल्ने विशेषता थप गरेको हामीले यही कोरोनाको बीचमा हो ।
अब तत्कालै ल्याउने तयारी गरिएको नयाँ कुनै प्रोडक्ट छ ?
अहिले छैन् । यिनै अहिले भनेका प्रोडक्टहरूलाई निरन्तरता दिने हो । किनभने अहिले नयाँ प्रोडक्टहरू बाहिरबाट ल्याउन पनि गाह्रो छ । यद्यपि एलजी भनेको यस्तो प्रोडक्ट हो जसले केही न केही आरएण्डडी (अनुसन्धान र विकास) गरिरहेकै हुन्छ । मानिसलाई जीवनलाई कसरी हुन्छ सरल र सहजरुपमा चलाउन नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू सोचिरहेको हुन्छ । आरएण्डडी गरेर केही प्रोडक्ट आयो भने हामी तीन महिनाभित्र नेपाल ल्याएर उपभोक्तसम्म पुर्याईहाल्छौं ।
कोरोना र लकडाउनका कारण धेरै क्षेत्रमा अनलाइनबाट काम गर्ने, कारोबार गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । एलजीका प्रोडक्टहरू अनलाइनबाटै बुकिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
ठूलठूलो प्रोडक्टमा अनलाइनबाट बुकिङ गर्ने कुरा उपभोक्ताले त्यत्ति धेरै विश्वास गरेको देखिन्न । मानिसहरूलाई एक पटक ‘टच एण्ड फिल’ गर्नैपर्छ । कोरोनाको समयमा हामी माक्स र स्यानिटाइजर लगाएर उपभोक्ताको घरघरसम्म पनि पुग्यौं । हाम्रो प्रोडक्ट ‘शो’ गर्यौं । उहाँहरूले मन पराउनुभयो ।
एलजीको बिक्रीवितरणको सञ्जाल कस्तो छ ? कति विस्तार गर्नुभयो ?
हाम्रो दुई–तीन वटा डिष्ट्रिब्युशन च्यानल छ । एउटा कम्पनीकै शोरुमहरू छ । त्यो शोरुम चाहीं काठमाडौं, विराटनगर, नारायणगढमा छ । त्यसपछि हाम्रो पूरानो डिलर च्यानल छ जुन ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म छ । हामीले त्यही च्यानललाई पुस गरेर, उनीहरूको क्यापासिटि बढाएर हामीले काम गरिरहेको हो ।